Olee otú Kọwaa / Hichapụ iPad Iji na-ere
Olee otú Iji-adịgide adịgide hichapụ ihe niile dị Tupu ere Your iPad?
Mgbe ị na-ere gị iPad, i kwesịrị ịkpachara nnọọ anya na ị na-ihichapụ ọdịnaya na gị iPad. Ọ bụrụ na ị na-ada ime otú ahụ, ọ bụghị nanị na a ga-ọhụrụ ọrụ-enwe ike ịnweta ozi nkeonwe gị ma n'otu oge, ọ pụrụ ndusụk ini-esi nnọọ ike maka ọhụrụ ọrụ na-eji iPad kwa.
N'ihi na 'Chọta My iPad' atụmatụ, ihe iPad nwere ike ekpochi maka ụdi ojiji na nke a bụ N'ezie a nnọọ ọjọọ ọnọdụ. Nke a bụ ihe mere anyị ga-a lee anya na ụzọ dị iche iche site nke ị nwere ike ihichapụ kpam kpam ọdịnaya tupu ere ya.
Ịgbanyụ 'Chọta My iPad'
Mgbe ị na-achọ na-ere ngwaọrụ gị, otu n'ime ihe ndị mbụ nke gị mkpa ime bụ gbanyụọ Chọta My iPad. Esonụ bụ ihe ndị mfe nzọụkwụ nke mkpa ga-agbaso.
Ime ka 'Ntọala' ngwa gị iPad.
Hover na 'iCloud'.
Ị ga-ahụ nhọrọ, 'Chọta My iPad'.
Ị ga-kpaliri ịbanye gị iCloud paswọọdụ.
Tinye paswọọdụ iji gosi edinam.
'Chọta My iPad' ga ugbu a ọma nkwarụ.
Ihichapu niile ọdịnaya na ntọala
Nanị ịgbanyụ 'Chọta My iPad' abụghị ezu dị ka ị ga-jide n'aka na ị na-ihichapụ niile ọdịnaya site na ngwaọrụ gị. Iji na-eme nke ahụ, eso ndị a.
Ime ka 'Ntọala' nhọrọ na gị iPad.
Site n'aka ekpe n'igbe, họrọ 'General'.
Ná ndepụta na-egosipụta, pịgharịa gaa na nnọọ ala na pịa 'Tọgharia'
Ị ga-ahụ a ọhụrụ window ebe ke mkpa ka ị na-ahọrọ 'Ihichapu All ọdịnaya na Ntọala'.
A ọhụrụ igbe ga-emeghe na ị ga-pịa 'ihichapu' iji gosi gị nhọrọ.
Ọ bụrụ na ị a paswọọdụ nyeere, Ị ga-kpaliri ịbanye ya.
Tinye paswọọdụ gị na iPad ga-adịghị anya-kpochapụrụ na ihe niile data ga-ehichapụ.
Na-adịgide adịgide na n'enweghị ihichapu niile data na Wondershare SafeEraser
Ezie na n'elu nzọụkwụ ndị mara mma dị mfe ma bara uru, mkpa ka ị mara na data ehichapụ na iji n'elu usoro ike ka a natara. Ọ bụrụ na hackers chọrọ, ha nwere ike naghachi-ehichapụ data na mgbe ahụ na-eji ya ka ha onwe ha mkpa. Ọ bụrụ na ị chọrọ na-adịgide adịgide ihichapu niile data na-ahapụ mba Chọpụta nke ọ bụla, ị kwesịrị ị na-eme ka ọ a mgbe iji Wondershare SafeEraser. Ọ bụ nnọọ otu n'ime ndị kasị dị irè ngwaọrụ.
Wondershare SafeEraser - Chebe Your Personal Nzuzo
Na-adịgide adịgide Ihichapu Your Android & iPhone iji chebe gị dịịrị nanị onwe onye.
Wepụ ehichapụ faịlụ na iDevices na-adịgide adịgide; ehichapụ faịlụ agaghịkwa recoverable.
1-Pịa nzacha na mkpocha ọcha junk faịlụ na-adị n'elu iDevice arụmọrụ.
Ọ bụghị nanị na-akwado foto & videos ma na-echebe gị oku na ndekọ, ozi na ndị ọzọ.
Ihichapu iPhone Private Data
1-Pịa Ebuli iPhone
Mpikota onu / mbupụ iPhone Photos
Wepụ iPhone ehichapụ faịlụ
Hichapụ akporo ekwentị-adịgide adịgide
Ebe a bụ ụfọdụ nke atụmatụ nke ọ na-enye.
Ọ na-enyere na ihichapụ faịlụ na-adịgide adịgide na-ahapụ nweghị ụzọ hackers na-ezu ohi gị data.
Ị nwere ike tọgharịa ngwaọrụ akpasarade ala.
Ọ na-enyere na ahụ gaa ọsọ ọsọ iPad site ịlụ Bibie nke na-achọghị junk faịlụ.
Ị nwere ike ikpochapụ onwe gị data na ipad, dị ka safiri cache, safiri akụkọ ihe mere eme, wdg
Ọ bụrụ na ị na-achọ na-adịgide adịgide ehichapụkwa niile data gị iPad na mfe iso nzọụkwụ, ebe a bụ ihe ị chọrọ ime.
Download na wụnye Wondershare SafeEraser na kọmputa gị.
Ẹkedori software na mgbe ahụ jikọọ gị iPad site na iji eriri USB.
The software ga-amata gị iPad.
Na isi window, ị ga-ahụ otu nhọrọ na-akpọ, 'Ihichapu All Data'.
Ị ga-ahụ a ọhụrụ window ebe gị mkpa iji tinye 'Hichapụ' na ederede igbe gosi ya na unu edinam.
Chere ruo mgbe nhichapụ na dechara.
Mgbe nhichapụ e mere, ị ga-a ozi na-asị na ọrụ e dechara.
The iPad e na-adịgide adịgide kpochapụrụ na ndị niile data ugbu a na ọ ahs e ọma ehichapụ-adịgide adịgide.
Olee otú adịgide adịgide Hichapụ Songs si iPhone
Olee otú Ọma Doro Anya iPhone ebe nchekwa
2 Ụzọ Hichapụ Text Ozi na android ekwentị
20 ATTENTIONS ịzụta ihe eji iPhone
Na ntukwasi-obi Hichapụ Your Android Tablet tupu ere ya
10 Best File Deleters wepụ na-achọghị faịlụ site Windows
Olee otú ntukwasi-obi ichicha ihe SSD Drive
Olee otú Kọwaa Internet History-adịgide adịgide na 1 Pịa
> Resource> ihichapu> Olee otú Iji-adịgide adịgide hichapụ ihe niile dị Tupu ere Your iPad?